Njirimara na Agency Agency nke ndị CMO chọrọ | Martech Zone
Inwe ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ma na-ama aka. Na mgbọrọgwụ nke ihe niile anyị na-eme maka ndị ahịa anyị, anyị ka hụrụ n'anya na-enyere aka ịkwaga ndị ahịa site na ahia ntozu ahia. Ọ na - enyere anyị aka ịrụ ọrụ na mbido na ndị ahịa azụmaahịa, na-eto eto na nghọta ha na ntanetị.
Ihe m na-aghọtaghị bụ oke mgbanwe anyị, dị ka ụlọ ọrụ, ga-eme iji nọrọ n'ihu nke ụzọ ahụ wee nọgide na-asọmpi na ụlọ ọrụ anyị. Ọ bụghị naanị mgbanwe n'àgwà nzụta, usoro okike, ma ọ bụ mgbanwe teknụzụ. Ọ bụ na nghọta azụmaahịa banyere ụlọ ọrụ yana otu esi enyere ha aka na-agbanwe. Ọ bụrụ na ndị ahịa anyị gara aga site na afọ ole na ole gara aga laghachiri taa, ha ga-ahụ usoro ahịa ọhụụ, akụrụngwa akụrụngwa na akụrụngwa.
Alọ ọrụ na-aga n'ihu na-enwe elele karịa ego ọrụ n'ihi na ha nwere ike ịhazigharị ụgwọ nke nka na ngwa ọrụ gafee ndị ahịa ha. Onye ndụmọdụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ kwesịrị ịwakpo nsogbu ahụ, ọ bụghị nsogbu ndị ọzọ metụtara azụmahịa nke ndị ahịa. Ndị ụlọ ọrụ na-achọta ka ha na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ka ha bụrụ nnweta ego dị mma karịa ịnwa iku ndị ọkachamara ọ bụla.
Nnyocha anyị nke ihe karịrị 70 CMO na 1: 1 gbara ajụjụ ọnụ na ndị isi akara si CMO Club kpughere ihe ndị ahịa na-achọ n'ezie na mmekọrịta ha. MediaMath, Evolving gị Agency Partnership Model ka mbanye Programmatic Successga nke Ọma.
Kedu ihe CMO bara uru site na ụlọ ọrụ
Kedu mpaghara ebe ụlọ ọrụ gị nọ nke kachasị enye aka na ịkụziri gị ika?
mma omume - Nghọta nke ndị na-ege ntị na njikarịcha
data - Nwe na mmalite
Partners - Na-eweta ndị mmekọ kachasị mma na tebụl
Ọkwa iji dị mkpa nke kachasị mma nkwado ụlọ ọrụ dị ka gị:
Nghọta - Mmekọrịta nke dabere n’ezi nghọta zuru oke
itinye n'ọnọdụ - n'etiti ebumnuche mkpọsa na ebumnuche azụmahịa
Echiche - Mkpakọrịta na ịdọ aka na-enye ohere maka echiche ọhụrụ, nzaghachi na-ewuli elu, na mkparịta ụka na-emeghe
Nhọrọ Nregharị - Imekọrịta ịchọta na iji teknụzụ mgbasa ozi na azụmaahịa kachasị mma dabere na mkpa m
Management - nke nyiwe teknụzụ niile na mmekota
nchọpụta - Na-ewebata nyiwe teknụzụ kachasị mma na tebụl maka usoro mkpokọta na / ma ọ bụ igbu
N'ezie, iduru ngwugwu na njirimara ọ bụla dị mma nkwurịta okwu! Anyị na-etinye oge dị ukwuu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa, na-ekwurịta okwu na ndị ahịa anyị taa karịa ka anyị na-emejuputa ma mejuputa usoro ndị ahụ.
Akụkọ zuru ezu na-elekwasị anya ma na-agụnye mmetụta nke mmemme mmemme. Nke a bụ nnyocha infographic:
Budata Akuko Na-akwụghị Onwe
Tags: gị n'ụlọnganghọtanhaziomume kacha mmaebumnuche azụmahịaMgbasa mgbasa oziKeduọgbakọ cmonyocha cmodatanhazi ihe mgbaru ọsọechicheahia ihe mgbaru ọsọteknụzụ ahịankataMgbasa ozimmekọnchọpụta teknụzụnjikwa teknụzụnhọrọ ndị na-ere ahịa